बेलायतमा अर्का पूर्व गोरखा सैनिकको नि’धन ! – Khabarhouse
बेलायतमा अर्का पूर्व गोरखा सैनिकको नि’धन !
Khabar house | २ बैशाख २०७७, मंगलवार ०३:०५ | Comments
काठमाडौं: को;रोनाको संक्रमणबाट बेलायतमा पूर्व गोरखा ६५ वर्षीय लक्षीनबहादुर गुरुङको सोमबार बिहान मृ’त्यु भएको छ। गुरुङसहित बेलायतमा को;रोना संक्रमणबाट मृ’त्यु हुने नेपालीको संख्या १० पुगेको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। केही दिनयता दिनदिनै नेपालीको मृ’त्यु भएको खबर आइरहेको छ।
पुर्खौली घर कास्की घान्द्रुकका गुरुङ लन्डनमा घरमै सेल्फ आइसोसेसनमा बसिरहेका बेला श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि करिब १० दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका थिए। लन्डनको रोयल बक्सायर अस्पताल रेडिङमा गुरुङको मृ’त्यु भएको हो। गुरुङ रेडिङ बुद्धिष्ट गुम्बा का आजिवन सदस्य र घान्द्रुक रेडिङ समाज युकेका अध्यक्ष थिए। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनमा विगतमा कुनै स्वास्थ्य समस्या थिएन।
गुरुङका श्रीमती र तीन छोरीहरु लन्डनमै छन् । परिवारको सबैको परीक्षण गर्दा को;रोना नेगेटिभ देखिएको पनि पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । पोखराको दीपमा पनि घर भएका गुरुङ लामो समयदेखि परिवार सहित बेलायत बस्दै आएका थिए । उनी फुटबल खेलाडी पनि हुन्। पोखरामा रहँदा उनले गण्डकी टिममा सामेल भई फुटबल खेलेको उनका समकालीन मिलेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए।